PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - Ngifisa ukubhoboka ngobubi engibenzile
Ngifisa ukubhoboka ngobubi engibenzile
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Izindaba - PASTOR STHEMBISO ZONDO
1. NGITHANDA UDADEWABO WENTOMBI KUNAYO
PASTOR: Nginenkinga yokuthanda udadewabo wentombi yami kunentombi. Ngabona intombi kuqala kanti izothi isingethula kudadewabo wavele waba muhle kakhulu kunentombi yami.
Njalo uma ngimbona imizwa yami ingitshela ukuthi umuntu okwakumele ngithandane naye wudadewabo wentombi, hhayi yona. Inkinga kangazi noma yena (usbari) unakho yini lokho uma engibona ngoba akakhombisi. Yimina ngedwa engehlelwa yile nto Pastor?
IMPENDULO: Asikubongele mfowethu ukuthi ukhulume iqiniso njengoba linjalo ngoba vele iningi lethu liyabhekana nezimo ezifana nalezi bese liyazivumela kodwa wena asikubongele ukuthi awuyivumelanga le nto ngoba iyakukhathaza, ngakho-ke siyakubongela kulokho.
Engingakusho nje wukuthi zibambe njengendoda ungasivumeli nakancane lesi silingo ngoba siyoxabanisa abantu bandawonye. Ukukhuluma nje iqiniso ukuba wawubone udadewabo kuqala wathandana naye ngabe manje unesilingo sokuthanda lo wakho ukuba kuthiwa awuthandani naye.
Impilo ngesinye isikhathi iwumbhedo nje ungawuvumeli-ke umbhedo wempilo ukubhedise.
2. UMA SENGIFUNA UMFAZI NGIZODLULELA PHAMBILI
PASTOR: Unina wengane yami ena-5 kakuvumi ngimshade. Sazumeka ngokuthola ingane singakuhlelele lokho, sasisathandane inyanga eyodwa ngingakamazi nakahle.
Okuningi kuye ngikufunde esekhulelwe vele, ngakhokhela inhlawulo nemindeni yomibili iyaseseka kepha mina nginomuzwa wokuthi uma sengifuna ukuthatha umfazi ngishade kuzomele ngidlulele phambili ngoba uthando lwakhe kimi kalwenele ukuthi usengaze abe yinkosikazi yami.
Kwenziwanjani uma kunje, ngabe ngiyagula noma kangeneliseki?
IMPENDULO: Mfowethu ngicela ungayenzi le nto yokuhlala nomuntu isikhathi eside kanti kawuzimesele ngaye ngoba uyothi mhla umshiya athi umchithele isikhathi sakhe futhi udlale ngaye (the sooner the better).
Hlalani phansi nibonisane ukuthi yini eningayithandi omunye komunye ngoba uma kungenjalo nichithelana isikhathi nje futhi kuyonisiza ukuba nisheshise.
Kungcono ukulinyazwa yiqiniso kunokulahlekiswa ngamanga.
3. SIKE SASIKAZA UKWEHLUKANISA SABUYE SAYEKA
PASTOR: Sineminyaka eyisi-8 sishadile nomyeni. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule sike sangezwana impela, ubaba wekhaya efuna ukuthatha inkosikazi yesibili.
Kanginqabanga kodwa ngathi kuye mina ngizophuma kulo mshado ukuze baqhubeke kahle. Yangihlukumeza kakhulu le nto emphefumulweni ngaya kummeli ngafaka isicelo sesehlukaniso, sabizwa sobabili ukuyochazelwa ngokwehlukaniswa kwezinto, ngabuyela kithi.
Ngosuku engabuyela ngalo kithi wafona umyeni exolisa wathi usehlukene nentombazane ucela ngibuyele ekhaya. Inkinga kangazi noma ngixolile noma cha ngoba ngizwa uthando seluvele lwaphela nya kimina futhi kangisafuni noma engithinta nje sekuthi mangihayize. Siyaye sibuye silunge yini isimo emuva kokusikaza isehlukaniso?
IMPENDULO: Cha mama njengoba senibukeka sengathi niyazama ukulungisa inkinga yenu salani senincenga inhliziyo nihlale phansi ndawonye njengoba nafunga nje ukuthi niyohlukaniswa wukufa lokhu okungakafiki njengoba sikhuluma nje kodwa ngiyakuzwa uma uthi usuphelelwe wukumthanda. Uma kunjalo-ke kungakuhle ukuba uyibuze kashumi inhliziyo yakho ngoba vele akukuhle ukuhlala nomuntu uma ungasenalo uthando lwakhe. Engikwaziyo nengingakululeka ngakho wukuthi izinto ziyalungiswa, kasikho isimo esingeke salungiseka uma kuzohlalwa phansi kuxoxiswane. Ezinye izimo zilashwa wukuhamba kwesikhathi (time heals).
4. NGIFISA UKUBHOBOKA NGOBUBI ENGIBENZILE
PASTOR: Ngiyintombazane (19) kuningi esengidlule kukhona okuhlukumezayo okunye kwakwenziwa yimi okungamahlazo ngisho abazali bami abangathi uma bewezwa bashaqeke.
Akekho umuntu engingakhuluma ngibhoboke kuye ngalezi zinto engizenzile ukuze ngiqale kabusha empilweni ngingenasazela.
IMPENDULO: Asikubongele dadewethu ukuthi ube nalo muzwa omuhle kangaka, wubuntu-ke lobo. Kuhle ukuzihlambulula usahamba emhlabeni, nokho-ke kufanele uthole umuntu omethembayo ozogonyuluka kuye lawa maqiniso amangaka akuhluphayo enhlizweni nasemoyeni wakho.
Uqaphele-ke ukuthi ungahlambuluki kumngani futhi ungahlambuluki kumuntu wasendaweni ohlala kuyo kodwa uma kunemfihlo othanda ukuyihlambuluka uboyihlambuluka kumuntu ohlala kude le nala uhlala khona ngoba yonke into oyixoxela umuntu uyaye ayixoxele abanye abantu.
Kuyaye kube kuhle ukuthi makwenzeka inhlambuluko yakho bese iputshukela kwabanye abantu ongabazi. Akekho umuntu emhlabeni oyoxoxelwa into bese eyathula nayo angayixoxeli muntu. Kuyasiza-ke ukuba uhlambuluke kude le ngoba ngeke ukake endlini bese iphunga lingabi bikho, yikho abadala bethi ithoyilethi balibeka ngale kwesibaya ukuze iphunga lingezi endlini.
5. NGIDINGA UTHANDO KEPHA KANGILUTHOLI
PASTOR: Ngingowesifazane (41), ngidinga uthando kepha kangimtholi umuntu ozongithanda. Ngihlukane nomuntu ebengizwana naye ngonyaka ophelile ngoba wayengenalo iqiniso, ehlala engikhohlisa. Kuze kube manje kangimtholi umuntu sengiqala ukukhathazeka. Ngicela iseluleko sakho.
IMPENDULO: Ayi dadewethu unkulunkulu aze akusize ngoba uthando lapha phandle lubukeka luluningi kanti kalukho futhi.
Dadewethu zama ukuzibamba nje ungaziphonsi noma kubani. Mina ngineqiniso lokuthi uma umthemba unkulunkulu uzokulethela okukufanele ngesikhathi esikufanele kodwa nje qala uzithande wena, uzithuthukise ngokuqhubeka ufunde, ungafani neningi elithanda ukuthandwa kanti kalikaze liqale lizithande lona. Uthando kalubhekwa kodwa uhlangana nalo.
6. UMA NGIMALA UVELE AKHALE
PASTOR: Nginomuntu ebengisothandweni naye kepha oseqala ukungihlukumeza ngokomoya. Uma ngithatha isinqumo sokuhlukana naye ngenxa yalokhu kuhlukumezeka uvele akhale bese ngimzwela kodwa khona kangisafuni ukuba kulolu thando.
Ngabe kumele ngimele iqiniso lokuthi kangisathandi la noma ngizwele yena?
IMPENDULO: Cha dadewethu/ mfowethu kubuhlungu ukuba sothandweni kanti kawusathandi ko-
dwa usuhlaliswe wukuthi uyamzwela nje umuntu othandana naye. Kubuhlungu ukuphenduka usonhlalakahle othandweni (social worker).
Hlalani phansi nibonisane ngoba ukukhala kakusizi futhi nawe uzokhathala ukulokhu utetenyelwa ngumuntu omdala. Futhi nje ukuba bengingabhali ephepheni lethu lesizwe ILANGA Langesonto bengiyothi uma emjolweni sekubheda ubonyamalala njengentuthu kagwayi.
Ngesinye isikhathi akuvaleliswana emjolweni ngoba vele asivulanga ngomkhuleko mhla siyiqala le nto futhi ayengekho namazwi akhulunywayo okwamukelwa. Umjolo uyafana nje nokugembula, uyawina noma udliwe, abagembulayo balahlekelwa yimali yabo, abajolayo bala-hlekelwa yizinhliziyo zabo.
*Kubo bonke abafundi bephephandaba lethu ILANGA, siyafisa ukuba sisizane futhi ngiyafisa ukuniphendula nonke kepha ngebhadi ucingo noma inombolo iyodwa ngakho akulula ukunibamba nonke.
*Upastor Sthembiso Zondo ngumeluleki nomethuli wezinkulumo ezakhayo. Wethula inkulumo ekhuthazayo ngolwesine bese ephendula imibuzo yabafundi ngezinkinga zempilo nezothando KWILANGA Langesonto. Abafuna ukuxhumana noma ukummema, inombolo ithi: 073 795 2292. Ungamshiyela nomyalezo kufacebook: Sthembiso Zondo Fan page noma kuwhatsapp: 082 070 8034. Abafisa ukukhonza nathi, bazosithola njalo ngesonto ngo-10h00 ejewish Hall. Uma udinga ama- directions thumela ISMS ku: 078 419 1024
ISITHOMBE NGABE: LIVEABOUT.COM
UMFUNDI wephephandaba udidekile ukuthi enzenjani emuva kokusikaza idivosi ngenxa yokuthi nomyeni wakhe ubesefuna inkosikazi yesibili. Yize umyeni esexolisile wayihoxisa indaba yesithembu kodwa yena akasenalo uthando lokubuyela emshadweni.